Faah Faahin Nabadayn Hordhac ah oo ka dhacday Deegaanka Kalabayr ee degmada Bursaalax ee gobolka Mudug | Puntland Vision
Faah Faahin Nabadayn Hordhac ah oo ka dhacday Deegaanka Kalabayr ee degmada Bursaalax ee gobolka Mudug
Iyadoo shalay galab iyo xalay lagu guulaystay kala qaadida labo Ciidan oo ka kala socday beelo walaalo ah oo dagaal ku dhexmaray deegaanka kalabayr ee degmada Bursaalax ee gobolka Mudug ayaa deegaankaasi waxaa gaaray wafdi ka socda maamulka gobolka Mudug.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Xassan Maxamed Khaliif iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay Galab gaaray goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa xoojiyey Maamulka deegaanka iyo Culimadda dadaal nabad galyo oo ay ka wadeen deegaankaasi iyagoona saaka ku guulaystay inay gabi ahaanba kala qaadaan labadii Ciidan ee ka socday Beelaha.
Gudoomiyaha gobolka Mudug iyo Taliyaha qaybta Booliska gobolka Mudug oo wafdigaasi qayb ahaa ayaa dhamaantood waxay halkaasi u tageen sidii loo xoojin lahaa Nabad Galyada dadka deegaankaasi waxaana sidoo kale magaalo madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo loo qaaday qaar kamid ah Waxgaradkii kasoo jeeday beelaha mid kamid ah.
Gudoomiyaha gobolka iyo Wafdigiisa ayaa markii ay halkaasi tageen tacsi u diray dhamaan dadkii isaga geeriyooday Beelahaas waxaana sidoo kale ku baaqeen in Coladaasi la joojiyo.
Guul hordhac oo laga gaaray xiisadaasi inaysan sii socon ayaa waxaa bogaadiyey waxgaradka iyo culimada waxaana sheegeen inay rajo wayn ku qabaan in xiisadaasi ay intaas ku joogsato.